Wasaarada waxbarashada Puntland oo ka war bixiyay soo dhamaadka imtixaanka shihaadiga ah – SBC
Wasaarada waxbarashada Puntland oo ka war bixiyay soo dhamaadka imtixaanka shihaadiga ah
Posted by Webmaster on Juun 2, 2012 Comments
Madaxda ugu saraysa wasaarada waxbarashada Dowlada Puntland ayaa maanta kullan ay ku qabteen xarunta wasaarada kusoo bandhigay qaabkii loosoo gaba gabeeyay imtixaanaadka shihaadiga ah ee fasalada 8- iyo 12-aad,waxaana guud ahaanba kasoo qayb galay kormeerayaasha imtixaanka ,waaxda imtixaanaadka iyo masuuliyiin kale.
Agaasimaha waaxda imtixaanaadka wasaarada waxbarashada Puntland Axmed Maxamed (Saaid) ayaa ka war bixiyay qaabkii usoo dhamaaday imtixaanka fasalada 12-iyo 8-aad ,wuxuna sheegay waqti badan iyo dadaal dheer ka dib in lagu guulaystay qaadista imtixaanaadka shihaadiga ah ee deeganada Puntand.
Dhinaca kale Axmad Saahid waxa uu sheegay inay dhamaan magalada Garoowe wada yimaadeen kormeerayaashii ,iyo howl-wadeenadii la socday imtixaanaadka ka socda Gobalada iyo degmooyinka Puntland ,isla markasna la gudo gali doono qaabkii loo sixi lahaa iyo howlo kale.
Agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada Puntland Maxamad Cabdiwahaab oo kullankaani ka hadlay ayaa aad ugu amaanay kooxda la socotay qaabka imtixaanka loo qaaday ,wuxuna sheegay inay ku bixiyaan dadaal dheer iyo waliba soo jeed badan iyagoona ugu danbayntii gaaray guushoodii oo ahayd soo dhamaynta imtixaanka .
Sidoo kale Kullankaani waxaa ka hadlay kooxdii kormeerka kusoo samaynayasya goobaha ay imtixaanka ka socdaan ,waxayna sheegeen inay la kullmaan qaab wanaagsan iyo waliba arday u diyaar san inay gallaan imtixaanka kama danbaysta ah ee fasalada 12-iyo 8-aad.
Sida uu sheegay wasiirka waxbarashada Puntland mar sii horaysay imtixaanaadka iskuulada Puntland waxaa lagu saxayaa gudaha dalka soomaaliya,iyadoona laga kaaftoobay kusoo sixitaanka dibada.
Yuusuf Maxamad Maxamuud